Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Iimpazamo ezili-10 eziqhelekileyo kwisikhululo seenqwelomoya ezikubiza imali
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ngokungazishiyi ixesha elaneleyo lokuya kwisikhululo seenqwelomoya, ungene ungene kukhuseleko oludlulileyo, ubeka emngciphekweni wokuphoswa yinqwelomoya. Oku kubiza kakhulu ukuba ubhukishe ngenqwelomoya enganiki mbuyekezo.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba uninzi lwezikhululo zeenqwelo moya zibiza abahambi ngeendawo zokutshaja ngefowuni.
Qiniseka ukuba upakisha amashwamshwam akho ngaphambi kwenqwelomoya ukugcina imali oza kuyisebenzisa xa ufika kwindawo oya kuyo.
Fumana imali yakho itshintshisene ngexesha elininzi ngaphambi kokuba ufike kwisikhululo seenqwelomoya kuhambo lwakho.
Uninzi lwethu xa sisiya kuhambo lwethu lokuqala lwamanye amazwe ixesha elide, iingcali zokuhamba zityhile iimpazamo ezili-10 zesikhululo seenqwelomoya ezikubiza imali kuhambo lwakho.
1. Ukufumana iteksi
Ngelixa ukufumana iteksi kwisikhululo seenqwelomoya kunokubonakala kufanelekile, uhambo lweteksi ukuya isikhululo zihlala zibiza, ngakumbi ngamaxesha aphakamileyo. Ukugcina iindleko ziphantsi, qiniseka ukubhukisha kwangaphambili ukuhanjiswa kwesikhululo seenqwelomoya, ngaloo ndlela awuhlali nje ubukele imitha inyuka! Ngenye indlela, jonga ukuba zikhona iibhasi ezibalekela kwisikhululo seenqwelomoya, kuba ezi zitshiphu kwaye zilungele okusingqongileyo.
2. Ulibale ngebhotile yakho yamanzi egcwaliswayo
Ngelixa kunokubonakala kuyinto encinci ukuyikhumbula ukupakisha, ukulibala ukuthatha ibhotile yamanzi engenanto, egcwalisekayo ngokhuseleko inokukuhlawula ekuhambeni kwexesha. Ngokubanzi, iivenkile zesikhululo seenqwelomoya zibiza kakhulu ukusebenza, ngenxa yoko amaxabiso ahlala ephezulu.
uninzi zeenqwelo ube nezikhululo zamanzi zasimahla apho ungagcwalisa ibhotile yakho wakugqiba ukhuseleko. Ngokuthatha ibhotile yakho enokuphinda isebenze, awugcini nje ngokugcina imali kodwa wenza into encinci kwindalo esingqongileyo.
3. Ukupaka kwisikhululo seenqwelomoya
Uninzi lwabantu lukhetha ukupaka kwindawo isikhululo kuba bacinga ukuba isondele kwaye ilungile. Nangona kunjalo, ukupaka kwisikhululo seenqwelomoya kuyabiza, kwaye kwezinye iimeko, ukupaka kwisikhululo seenqwelomoya kunokuxabisa ngaphezulu kwetikiti lendiza.
Ayibizi kuphela, kodwa imoto yakho isenokungakhuselekanga kakhulu, njengoko ishiywe ngaphandle ukujongana nezinto, kwaye zininzi iimeko ezibhaliweyo zeemoto ezibuyayo zonakalisiwe.
Ungagcina ixesha kunye nemali ngokujonga kwipaki eyahlukileyo, iindlela zokulala kunye nokubhabha. Oku kukuvumela ukuba upake ngokukhuselekileyo imoto yakho ehotele ngalo lonke ixesha lokuhamba kwakho, hlala ehotele ngobusuku bangaphambi kwaye uphinde ukuvalele ukusuka nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya. Ukukhetha ipaki, ukulala ngokubhabha kukunika inqanaba lokhuphiswano oluninzi ngakumbi lokupaka kwakho.
4. Ukungacwangcisi kwangaphambili
Sonke siyazi ukuba izikhululo zeenqwelomoya zinokuxakeka, zinemigca yokhuseleko ehamba kancinci kunye nolunye ulibaziseko, ke kubalulekile ukuba ucwangcise uhambo lwakho oluya kwisikhululo seenqwelomoya kwaye uzinike ixesha elininzi ngaphambi kokuba ubaleke.